Ingaba Isitshayina girls 'lula'. Nezinye iingcinga kwi emnqamlezweni-yenkcubeko dating - Sup-China
Ingaba Isitshayina girls ‘lula’. Nezinye iingcinga kwi emnqamlezweni-yenkcubeko dating – Sup-China
Victor Zheng yi Isitshayina mna-media personality, ngoku abahlala e-U. S, othe ipapashwe kwi kunye Isitshayina kwaye isixhosa kwi ezahlukeneyo izihloko touching kwi emnqamlezweni-yenkcubeko dynamics. Dating dynamics asoloko umdla ukuqwalasela, ingakumbi variances njani na ezahlukeneyo cultures okanye abantu ezahlukeneyo iindawo ndiyawazi ezithile behaviors okanye unwritten imithetho. Kwi-China, okwangoku trending isihloko kukuba le”kulula kubekho inkqubela,”referring ukuba umntu othile perception ukuba wobulali girls (commonly abo kwi-Mpuma kwaye Umzantsimpuma Asian amazwe) ukuthandwa abavela kumazwe angaphandle amadoda. Eli yaba phantsi ukuba anomdla kum ngenxa yokuba sele kuza kutsho kwi-ezininzi personal iingxoxo kunye nabahlobo kunye kwaye ngaphandle China kwaye varying yenkcubeko backgrounds. Ndaba lunchtime ngxoxo nomnye mna-media personality umntu intimately owenza ihlabathi ka-Isitshayina loluntu media kwi yenkcubeko ubude kwaye ukubaluleka kwesi sihloko. Yena wachaza ngokulawulwa njengokuba painful ndawo okanye elinovakalelo indawo, ukuba omnye touches kwi lizwe ke yenkcubeko ikratshi, owenza ngayo ingakumbi fascinating kwi-Isitshayina imeko. Igama elithi”kulula kubekho inkqubela”pervasive kwi Isitshayina-intanethi kwaye unako rhoqo kufumaneka kwi-izimvo candelo stories okanye iividiyo involving interracial budlelwane nabanye. Umzekelo, kwi-ehlotyeni, omnye ibali ukuba ignited ngawo ngxoxo-mpikiswano waba xa i-Spanish umntu waba filmed ukwabelana ngesondo neqabane a Isitshayina umfazi in Chengdu. I-responses varied nakukwenziwa taunting emsindweni ngomhla perception ukuba abavela kumazwe angaphandle amadoda nje bona Isitshayina girls njengoko”cheap”njenge -“izinto zokudlala.”Incidentally, urhulumente media kanjalo enjoys olusebenza lo mxholo (kuba iinjongo mna ll hayi speculate). Ingaba China ke abafazi obsess phezu abavela kumazwe angaphandle amadoda. wabuza Yehlabathi phinda-Phinda. Hayi kuba outdone, Ingaba Isitshayina abafazi obsess phezu abavela kumazwe angaphandle amadoda.
Google Isitshayina girls ingaba lula kwaye ll fumana okuninzi ngakumbi.”Ingaba ezininzi mhlophe abantu bacinga Isitshayina girls ingaba ‘lula girls'”. ucela a iphowusta kwi Zhuihu, Ividiyo Dating-njenge Q A iqonga. Iphepha wenziwe watyelela ngaphezu yezigidi phinda-phinda. Ke ngamanye amaxesha kuvakala ngathi yokuba i-interracial budlelwane unako ayikho kwaphela ingaba isizathu kuba umsindo.”BBC ngqo wenza ividiyo kwi njani umhla Isitshayina girls, netizens uluntu luza kuxhamla,”ifunda a ingongoma yombala kwi enye kwi Sine. Zange khumbula ukuba BBC ividiyo kwi umbuzo uthi ngqo enesihloko Njani Na ukuba Umhla a Isitshayina kubekho inkqubela, kwaye a satirical thatha kwi, kulungile, into emhlophe abantu abamele ingaba ukuba babe ufuna umhla a Isitshayina kubekho inkqubela. Abantu abaninzi ingaba ubuncinane superficially ngobukho stereotypes enxulumene ne-Isitshayina amadoda nabafazi. Ndiyacinga, njengokuba Isitshayina i-american, mna anayithathela usoloko uhleli ngobukho stereotype ye-isibheno (okanye ukunqongophala ngaphaya koko) Isitshayina abantu i-unye ukuba Isitshayina girls ngala”kulula”ingaba tyhila kwicala le coin yayo s a misogynistic kwaye ezinobungozi unye, ewe, kodwa thina andinaku ukuba ikhona. Layo s kutheni made kum ufuna ukwenza oku kulandelayo ividiyo (ndinento enye ngokuxoxa i-perception ka-Isitshayina kwaye Asian guys kwihlabathi liphela). I-reactions kwi-bam Weibo kwaye Bili ii-akhawunti, ngexesha hayi reflective ka-China (akukho nto kusenokuba, ngenene), ubuncinane amele ethile inxalenye China ke amakhulu izigidi-intanethi abemi. Abanye kuthi i-lula kubekho inkqubela stereotype ikhona ngoba kulula kubekho inkqubela ngu shorthand kuba injongo inyaniso ukuba Isitshayina girls ingaba ukhetha abavela kumazwe angaphandle amadoda: Hollywood nezinye Western imigangatho ubuhle kuba seeped kwi Isitshayina subconscious, ngaloo ndlela ukwenza foreigners k ubonakala ngathi nabafana yi-uthelekiso. Abanye ingaba nationalistic: vehement zabo stance ukuba Isitshayina girls asingawo lula xa kuthelekiswa ne-girls kwi-Umzantsimpuma Asia okanye amanye amaqela ka-Mpuma Asia, ukusukela ekubeni”kulula”kuthetha ezi girls ngala”igolide diggers”ngubani ohlala kuyo i-economically ababehlelelekile ngaphambili, kweli lizwe. Ezinye izimvo ingaba nakedly sexist kwaye xenophobic, blaming abafazi kuba izigqibo ngokwabo kakhulu ezikhoyo kuba”langaphandle umgqomo”abathe imali kwaye prestige, ngexesha blaming foreigners kuba ekubeni overly promiscuous. Iyagqitha pha ngaphandle esithi, kodwa ezi akunjalo, yintoni sibe nento yokuba umnxeba okulungileyo opinions, kwaye baya. a kude kukhala ukusuka thoughtful kwaye nuanced iimpendulo bam-nxaxheba wanika: ababethetha malunga kwempembelelo yomoya Hollywood (-yesibini phawula), yokuba abaninzi olunye ulutsha foreigners bakholisa ukuba kwenzeka-China (kwaye nkqu yenkcubeko ifuthe Isijapanese eendaba (. Ngexesha elinye, abaninzi abathathi-nxaxheba kanjalo wagxininisa ukuba kukho iindlela ezininzi ukubonisa i-stereotype s bukho, kwaye ukuba kukho plenty ka-Isitshayina abakhoyo hayi conditioned ukubeka foreignness kwi pedestal. Mhlawumbi eyona crucial imboniso ngu yacaciswa ngo wam-nxaxheba ekupheleni: Akukho mcimbi yintoni a budlelwane ikhangeleka ngathi kwi ngaphezulu, kuphela abantu ukuba baqonde ulwalamano kutheni ngabo kunye, kwaye ekugqibeleni, alikwazi ukwahlula phezulu ukuze abanye speculate. Alas, kwilizwe apho imiba ngokobuhlanga ingaba elubala kwaye shamelessly lixoxiwe, oku kwaba kakhulu liked uluvo ngomahluko wam ividiyo kwi-Bili:”Isitshayina abantu ngathi mhlophe imigca enqamlezeneyo, alikwazi ukwahlula ngenxa langaphandle impembelelo, ke waziva ngathi le ukusukela yamandulo phinda-phinda.”Mna ngenene asikwazanga kufumana naliphi na okungcono njani abantu babeya react. Wam personal elokugqibela ukususela ingxelo ndisibonile kukuba abantu kuba ezininzi yenkcubeko ikratshi, kodwa kanjalo endinako kakhulu obvious insecurities. Kubonakala kum ukuba society ingu wrangling kunye stereotypes kwaye perceptions kwaye bulgaria robul phandle into efanelekileyo impendulo, kufuneka. Andinguye na kangakanani wam isiqulatho luye lwanegalelo a productive ngxoxo, kodwa yintoni ibaluleke kakhulu kukuba incoko unako ukuqhubeka kwi-i-injongo, rational, kwaye mhlawumbi indlela eluncedo. Isitshayina girls kwi-China, Etaiwan kwaye Hong Kong ingaba ngokuqinisekileyo lula kuba mhlophe guys. Ukuba ufaka mhlophe kwaye aninako ukufumana amakhulu imihla kwezi amazwe, nibe ngokunjalo jika gay ukusukela ukuba ufuna pretty kakhulu hopeless kwenye indawo. Kwesinye isandla, Isitshayina samakhosikazi la mazwe vigorously ikhusele ukuba bamele lula kuba mhlophe guys ngenxa yekratshi. Phantse nasiphi na mhlophe guy unako kuba lula ngesondo, ngoko ke Isitshayina umfazi uza ukuchitha elandelayo mini justifying kuye ukuba yena ngu ngokuqhelekileyo kakhulu conservative kubekho inkqubela. Mhlawumbi kuphela kweli xesha kusoloko kwenzeka ntoni kule olungcwele, kodwa ngesondo soloko ilula loo nto ezantsi umgca. Molo Victor, ndifumanise ukuba i-ifayile yakho inqaku kakhulu productive kwaye ayikwazanga uyavuma ngaphezulu nge yonke into kuwe wabhala. Ndine ngokwam balingwe zichaza ukuba onke amaqhinga mna ve learnt malunga yokufumana girls kwi-China kule ncwadi. manditsho ndiyazi ukuba ucinga ntoni, le ncwadi kanjalo bathethe malunga njani ukufumana Western girls kwi-China, kwaye ndiya ndiqinisekile ukuba komhlaba malunga yintoni kuzakufuneka kuthi malunga ngayo Umbulelo wakho insights, vumelani s kuthetha kamsinya Uxolo kuthi ke INYANISO langaphandle umfazi ingaba zonke lula xa oko iza imali ukufumana kude intlupheko bahlala njengoko wam incopho ka-imboniselo sizathu ndizibonile iinkozo ezininzi ulutsha kubekho inkqubela abo watshata kuba ukuba izizathu kuphela ezibuhlungu ukuthi abantu ukuba yiya abo amazwe okanye Indoda bride i-hamba kuba ukuxelela zonke, ukuba akukwazeki ukufumana umfazi ukusuka kwilizwe lakho into engalunganga nani ukuze babe bona ngoko ke u ahambe LULA indlela kwaye hayi care njengoko ixesha elide njengoko baya ixhomekeke kuwe umthetho yokuba uthando kuwe. xa enyanisweni baya musa ingakumbi xa kukho i age isithuba. Ndizibonile Asian abafazi apha kwi-USA abenza i-easiest ndenze bakholelwa kuyo xa mna ibambe wam bf seeveki jonga imiyalezo phakathi kwabo njani bahlangana basically yena waya phezulu kuye xa wayeneminyaka ekubeni lunch lalihleli elandelayo kuye elandelayo imini yonke eminye imihla wayengomnye wakhe umandlalo ngaphandle ukwazi into isigcawuname kwakhe, waye yonke into yena uvuma ngexesha apho disgust kum xa mna kujongenwe kuye wakhe yena wathi ngabo abahlobo nto yenzekile. dibanisa, yena yi umama mna uqaphele yena kuphela nasengozini e herself yilonto umyeni sele epheleleyo custody ye-boy andinaku kuthi ngaphezu ewe Asian namhlanje yr. edlulileyo ingaba lula kuyo yonke indlela. Ukuba Isitshayina indoda ngu kunye langaphandle kubekho inkqubela, lowo s congratulated yi-wonke ubani. Ukuba Isitshayina guy yenza jikelele kwaye cheats ngomhla wakhe Isitshayina girlfriend, akukho real ezikhethekileyo thabatha ingqalelo bucala ukusuka amaxesha amaninzi ingaba kuhlawulwa kuye. Nangona kunjalo, ukuba langaphandle umntu nge Isitshayina kubekho inkqubela, ezimbalwa ngu wajonga ezantsi phezu kwaye ezi stereotypes ingene dlala lula kubekho inkqubela mthubi fever njalo-njalo. Ukuba langaphandle umntu yenza jikelele kunye Isitshayina girls, uba omkhulu yaba kwaye zonke kwi internet. Layo s racism kwaye nokucalulwa non-Isitshayina abantu kwi-e-Asia.
Abanye abantu nje andinaku ngathi ayixhasi namnye uqiqe a ezimbalwa ekubeni kunye ngenxa yokuba ufuna ukuba abe nokuba ngokobuhlanga kwaye abanye abantu ukudlala jikelele ngenxa yokuba ingaba abantu hayi ngenxa yabo ugqatso Asians ingaba ngoko ke, kulula, kwaye elihle, kwaye beautiful, kwaye kunye okulungileyo manners kwaye ixabiso mna hate mhlophe arrogant westerners (ingakumbi-Anglo-Saxons) baya ukuba kunzima ukusebenza ngokupheleleyo hopeless kuba decent abantu, musa inkunkuma yakho ixesha, etyheli fever ufumana i-real yaba. uninzi bahlobo bam abo bathe Asian kubekho inkqubela abahlobo ayinakuze umva mhlophe girls ngonaphakade nganye-nganye, ndinguye kuyo Isitshayina guy. Mna nyani ukuba beka phantsi ngaphandle kunye western kubekho inkqubela ngoko ke ukuba ndinako kuba envied ngabo bonke Isitshayina abantu, ngolohlobo enye kukhankanywe ngasentla. kuku ndiza kokuqwalasela ke Shenyang China ukuhlangabezana a beautiful Isitshayina kubekho inkqubela mna ve ukuba uthetha kuwe kuba kwiiveki ngoku. Mna ke watshata kabini kweli lizwe ukuya Entshona girls kwaye abathembekanga. Mna m i-one-umfazi indoda zange sele antonio zange igcine a cigarette kwaye ndiza ubudala kwaye mna zithe uyahlukunyezwa. Oku Isitshayina kubekho inkqubela uthetha amazwi ukuba andizange weva kweli lizwe. I-nicest amazwi mna ve ngonaphakade amava. Ndiza iphaphazela ukuba China kumacandelo kwiintsuku kuhlangana naye. Ingaba nabani na ngaphandle apho watshata kakhulu Isitshayina elonyuliweyo okokuba baya kuba dork iminyaka emininzi. Kuhlangana phambi izimvo Ndiya kwenza oku lifelong isigqibo. Ukuba kukho nayiphi na secrets ukuba Isitshayina bagcine ukuba ndifuna wazi malunga, nceda vumelani undazise. Imibulelo, ndandidibana oku Isitshayina kubekho inkqubela namhlanje. Ndicinga ukuba Isitshayina girls ingaba ngenene aph.
Andifuni t ndiyazi ukuba yena ngu lula okanye hayi, kodwa mna ve kokuba ezininzi ubunzima dating i-american abafazi. Ndinguye i-i-american mhlophe indoda nomfazi, kwaye yena waye undixelele ukuba Isitshayina girls bakholisa ukuba ikhethe kwabo. Ndicinga ukuba isizathu kukuba akukho kangangoko iyantlukwano kwi-China. Nakuba kunjalo, ndiyathemba ke kusenokuba bam girlfriend emva ezimbalwa imihla
← Isitshayina Abafazi: Kuhlangana Zinokuphathwa Isitshayina Abafazi ngomhla Omnye Umntu Ukuhamba